दुःखद समाचार सबैलाई रुवायो : कोरोना’का कार’ण दुई दिने शि’शुको मृ’त्यु – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/दुःखद समाचार सबैलाई रुवायो : कोरोना’का कार’ण दुई दिने शि’शुको मृ’त्यु
दुःखद समाचार सबैलाई रुवायो : कोरोना’का कार’ण दुई दिने शि’शुको मृ’त्यु
एजेन्सी- विश्व महामारी कोरोनाका कारण दक्षिण अफ्रिकामा दुई दिनका शिशुको मृत्यु भएको छ । अन्तराष्ट्रिय मिडियाका अनुसार । दक्षिण अफ्रीकामा पहिलो पटक दुइ दिने बच्चाको मृत्यु भएको हो ।
बच्चालाई जन्मनासाथ सास लिन समस्या भएर तुरुन्त भेन्टिलेटरमा राखिए पनि बचाउन नसकिएको बताइएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३ लाख २९ हजार नाघेको छ ।
५० लाख ८० हजार संक्रमित मध्ये २० लाख २० हजार उपचार पछि निको भएका छन् । ४५ हजार बढी संक्रमितको स्वास्थ्य गम्भीर छ भने बाँकीको अवस्था मध्यम रहेको छ ।
जीवनयापन गर्ने क्रममा विभिन्न किसिमका समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् । ती समस्याहरुले तंपाईमा तनाव पैदा गर्दछ । तनावले गर्दा तंपाईलाई ढिला निद्रा लाग्ने गर्दछ । दिनभर कडा परिश्रम गर्दा पनि निद्रा नलाग्न सक्छ । शरीरलाई आराम दिनको लागि निद्रा लाग्नु आवश्यक हुन्छ । यहाँ एउटा ड्रिङ्क बारेमा बताइएको छ जसले तंपाईको अनिन्द्राको समस्यालाई टाढा भगाउने छ ।
कागतीको रसबाट तयार हुन्छ ड्रिङ्क
तंपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । कागतीको बारेमा विभिन्न किसिमका शोध भएका छन् । जसमा यस कुराको पुष्टि भएको छ की कागतीको सेवनले अनिन्द्राको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । कागतीले स्लिपिङ्ग हर्मोनलाई सक्रिय बनाउने काम गर्दछ ।
नेसनल सेन्टर फर बायो टेक्नोलोजी इन्फर्मेसनका अनुसार कागतीमा तनावलाई पनि कम गर्ने गुण रहेको बताएको छ । यति मात्र नभइ कागतीको फ्लेवर भएका सेन्ट र रुम फ्रेसनरको पनि प्रयोग गर्ने सल्लाह डाक्टरहरुले दिने गर्दछन् ।
सामाग्री– १ गिलासको लागि
–एक चम्चा नुम
१. सर्वप्रथम कागती काट्ने, त्यसपछि कागतीको रस निचोर्ने
२. त्यसपछि एक गिलास पानी र कागतीको रसलाई चम्चाको सहायताले घुलाउने
३. माथिबाट एक चम्चा नुन हाल्ने र सुत्नुभन्दा आधा घण्टा अगाडि सेवन गर्ने
४. दुईदेखि तीन दिनसम्म लगातार सेवन गर्दा तंपाईको अनिन्द्राको समस्या हल हुन सक्छ ।
बालाजु बृत्तमा कार्यरत इन्सपेक्टरलाई कोरोना संक्रमण पुष्टी
रोजगारीको लागि इराकको कुर्दिस्तान पुगेकी एक नेपाली महिलाको मृत्यु
भारतमा एकै दिनमा ३९ जनाको मृत्यु
छोरी खोजिदिन आग्रह गर्दा महिला प्रहरीको जवाफ; ‘पोइ चाहिएर गई होली’
विश्व बैंकले नेपाललाई १२ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने, सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर